I-Helptranslator: Ithuluzi lokusiza ukuhumusha amafayela we-.po | Kusuka kuLinux
Sanibonani Bangani, kulokhu ngibhala ukuze ngabelane nani ngethuluzi engilidalile lokusiza ukuhumusha kwamafayela * .po.
Uma kwenzeka ungazi, lapho umqambi efuna ukuthi uhlelo lwakhe lukwazi ukubonakala ngezilimi eziningana, ufaka ikhodi ngendlela ekhethekile (kuya ngolimi lohlelo alusebenzisayo) izintambo zombhalo ezizobonwa ngumsebenzisi ukuze izinhlelo ezikhethekile ezifana ne-PoEdit (isixhumanisi), lula ukuhumusha kwabo futhi wakhe amafayela * .po.
Lokhu kusetshenziswa uhlelo lokusebenza: Uma ilayishiwe, ibheka ukuthi uhlelo lukuphi futhi isebenzisa ifayili ye-.po ehambisanayo ukukhombisa imiyalezo nemibhalo yezingxenye (izinkinobho, amathebhu, amamenyu, njll.) Ezihunyushwe ngokuya ngokuthi ziyini yithi .po file
Amafayela anokwandiswa kwe- Italian) njll.
Isicelo sami "semi-othomathikhi", sidinga ukungenelela komsebenzisi ukwenza lo msebenzi. Ngichaza ukuthi isicelo sami senzani:
Funda ifayela le-XX.po njengoba utshelwe. Uma ngithi XX ngisho igama lolimi: es (Spanish), en (English), fr (French), etc ...
Ikhipha yonke imishwana bese iyibeka ebhodini lokunameka.
Umsebenzisi unamathisela leyo mishwana ekhasini lokuhumusha le-Google, ahumushe, (elinye ikhasi lokuhumusha lingasetshenziswa), ukhetha ulimi (i-XX ulimi) bese echofoza inkinobho yokuhumusha. Kopisha imishwana ehunyushiwe kubhodi yokunameka bese uyinamathisela kuhlelo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza luguqula ifayela le-XX.po. Qaphela: izokwakha nefayela le-XX.mo (ifayela kanambambili okuyilo uhlelo lokusebenza elizolisebenzisa ngempela).
Ngikwenzile lokhu, sisebenzisa iPoedit ukuhlela ifayela le-XX.po futhi siyabona ukuthi imishwana yokuhumusha ifakwe kanjani. Isinyathelo esilandelayo ukubukeza ukuhumusha futhi sikwenze ngcono (sonke siyazi ukuthi ukuhumusha komshini akukuhle kakhulu).
Ngikushiyela ividiyo echaza inqubo:
Ungalanda uhlelo ku-blog yami yangasese: http://jsbsan.blogspot.com.es/2015/02/helptranslator-herramienta-para-ayudar.html
Ihlelwe kuma-prawns3.5.4. (kulesi sixhumanisi ungazi ukuthi ungayifaka kanjani)
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Helptranslator: Ithuluzi lokusiza ukuhumusha amafayela we-.po
Lolu hlelo luhunyushelwa ezilimini ezi-4 (isiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane nesiJalimane) kulandela indlela engichazile.
Isishicilelwe izinsuku ezine, futhi ngithole ukuhumusha okuthuthukisiwe nokulungiswa ngabasebenzisi ababili abangabomdabu baseFrance nase-Italy.
Ukube ibingazange ibe nokuhumusha "kokuqala", impela akekho umuntu ovela kulawo mazwe obengama ukuze abone uhlelo lokusebenza (noma ubengeke azi ukuthi kwenzelwe ini) ngoba nje belungeSpanish.
Isiphetho sami ukuthi ithuluzi liwusizo. Kuyasiza ekuhumusheni izinhlelo, noma ngabe kungukuhumusha okungalungile, kukuvumela ukuthi kufinyelele kubantu abaningi, nokuthi laba bantu bangasiza ukuthuthukisa ukuhumusha.
Ngaleli thuluzi, ukuhumusha okungu-4 kuthatha iminithi eli-1 ukukwenza nokukufaka ohlelweni.
Yini ongaba umehluko ngePoedit?
Siyabonga ngokwabelana. Jabulela
Uhlelo lwami aluyithathi indawo yePoEdit, luyaluqedela.
Kwenza kube lula ukufaka izinguqulo zabahumushi be-google cishe ZONKE imishwana, ngokuchofoza okumbalwa kwegundane, kufayela le-xx.po.
Ngemuva kwalokho ngePoEdit, uhlela ifayela le-xx.po bese uhlola ukuhumusha.
Ku-Ubuntu 14.04 ngemuva kokunginikeza amaphutha amaningi wokuncika kusuka ku-Gambas rendinme.
Udinga ukufakwa ama-gambas3.5.4
Ngicabanga ukuthi ku-Ubuntu 14.04, inguqulo ye-gambas3.1.1 ifakwe ngokuzenzakalela.
Kufanele ungeze le PPA:
$ sudo engeza-apt-repository ppa: i-gambas-ithimba / i-gambas3
$ sudo uthole-uthole isibuyekezo
$ sudo apt-get ukufaka i-gambas3
Kulesi sixhumanisi kuchazwa ukusatshalaliswa okuningana:
Ngiyabonga manje ukuthi iyangisebenzela.
okuthakazelisayo, hlala futhi ugcine izinhlelo 🙂
Isixhumanisi esivela kunothi asisebenzi kimi.
(Ngizobe nginephutha lapho ngiyifaka ku-athikili)
Kunoma yiziphi izindatshana zami ngihlala ngibeka isixhumanisi sokwazi ukufaka i-gambas3
Uma uthemba i-Google Translate ukuthi ihumushe… Uma ufuna okuthile okunobuchwepheshe, kungcono uqashe umuntu othile ukuze ahumushe.
Umgwaqo u-Adrian Arroyo:
"... ..Ukuqasha umuntu ozohumusha."
Ukube benginemali, bese…. Besingeke sikhulume nganoma yini ... ngingenza lokho okuncomayo.
Leli yithuluzi lalabo abangenayo imali noma abangakwazi ukukhokhela umhumushi futhi abafuna ukuhumusha izinhlelo (ezabo noma ezabanye).
Ngingomunye walabo abajwayele ukuphendukela kuTranstator, empeleni ngikwenze neFireJamendo, ngisho nomdlalo engiwenzele iZx Spectrum, kepha akuyona ngokuvamile inketho enhle kakhulu ngoba izikhathi eziningi ukuhumusha akulungile, futhi ngikusho kuwo womabili amacala , okwathuthukisa ukuhumusha.
Yebo, mina engihlala ngenza izinto zolimi, futhi ama-prawn, ngiyakwazisa kakhulu, kuzongisiza kakhulu ukuthi ngeke kusheshe ukuhumusha kube lula kakhulu njengoba ukuhumushela wena + umhumushi owubukezayo nesikhathi.
Njengamanje ngihumusha i-opencaesar futhi kunezinkulumompikiswano eziyizinkulungwane zokuhumusha futhi azisebenzisi i-poedit, ngakho ngiyazibona. Ngakho-ke konke okwenziwa ukwenza lula imisebenzi kuhle.
Kwaphinda futhi uhlelo 5 izinkanyezi. Siyabonga ngokwabelana.
Ngigcina ukubambisana nokuhumusha, ngisebenzise i- https://www.transifex.com eneklayenti lewebhu elihle kakhulu.
Leyo yipulatifomu yokukhokha, $ 19 / ngenyanga.
Indlela yami ibiza u- $ 0 / ngenyanga, kuyacaca ukuthi akuyona indlela yokuhumusha "ehamba phambili", kepha ishibhile.
Ungazama i-QT, imfanzi isetshenziswa kakhulu
"Ungazama i-QT, ama-prawn ayaphelelwa yisikhathi"
Uyiphutha, i-prawns2 uma ingasetshenziswa, kepha i-prawns3, iyabila.
Ulimi olulula nolwesimanje (lusekela i-OOP paradigm) futhi lushesha njengePython.
IGambas3 -> 111.000 imiphumela
qt -> 256.000.000 imiphumela
Ngeke ngihlole ama-range3, kune-OS esebenza ngokususelwa ku-qt, ngaphezu kokuthi i-multiplatform kufaka phakathi izingcingo ze-Windos 8 nezingcingo ze-android, umqondo we-qt unonya kufaka yonke imibhalo, emazwaneni angenhla engikutshele wona ukuthi izame uma uyithanda kakhulu i-gambas3, «ukunambitha imibala»
«, Kumazwana angenhla ngikutshele ukuthi ungazama»
"Imigqa iya iphelelwa yisikhathi"
Okungelona iqiniso. Ukube ubukade ugembule ama-gambas3 eminyakeni emi-3 edlule, ngabe awutholanga miphumela.
Umsebenzisi akanandaba ukuthi isicelo senziwa ngaluphi ulimi, kuphela uma silusizo kubo.
Uma ingakusebenzeli, akunandaba ukuthi ihlelwe ngaluphi ulimi (C, C ++, Java, Python… noma iGambas3), ngeke isakusebenzela.
Njengoba usho "ukunambitha imibala."
Kungaba nentshisekelo uma ungazange uhumushe kabusha amabinzana abesevele ehunyushiwe. Futhi, bazomaka ukuhunyushwa okusha ngokuthi «fuzzy» (okwesikhashana), ngakho-ke siyazi ukuthi iziphi okufanele sizibuyekeze
»Hhayi ukuhumusha amabinzana asevele ahunyushiwe futhi."
Le nketho isivele ifakiwe ohlelweni (bheka ibhokisi lokuhlola elivela efomini, elibizwa ngokuthi »Susa imisho ehunyushwe»).
Uma ikhutshaziwe, noma ngabe uyihumusha kusihumushi se-google, ngeke siyifake kufayela le-.po, uma selivele linokuhumusha. Kuhlole.
U-Agustin Ferrario kusho
Uqinisile, ngakho-ke isincomo sami ukuthi inketho yokuzenzakalelayo ikanye nebhokisi lokuhlola likhutshaziwe. Kusukela lapho umuntu esebenzisana nephrojekthi, ukuhumusha okuvele kukhona kuyamukelwa (futhi kaningi badlule ku-QA ngokwesibonelo.
Phendula u-Agustin Ferrario
«Okunconywayo kwami ​​ukuthi inketho ezenzakalelayo inebhokisi lokuhlola elingasebenzi. »
Kulungile, inombono wayo.
Enguqulweni engu-0.0.7, isivele iguqulwe kanjena. Ungayilanda kusixhumanisi esifanayo:
Kungani ungayihlanganisi namaGambas esimanje ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuyisebenzisa ngaphandle kwezinqolobane zangaphandle?
ahh, endala uhlelo lwami, ukuthi indawo yokugcina eyakwaGambas 3.5 futhi ubuntu bami 14.04 bunendawo ephansi. Ngiyabonga.
Iphutha, ngizamile ukuhumusha okuluhlaza okwesibhakabhaka kusuka esiNgisini kuye kusi-Esperanto (eo) (leyo isebenzisa umucu ofanayo wobuningi ekucushweni kwekhathalogi), futhi uma ngibheka inketho yokususa izintambo ezihumushiwe (ngoba kukhona eziningana ekuqaleni ihunyushwe esiNgisini ngemuva kokukopisha i-en.po iya ku-eo.po) ngoba lapho ngiqeda inqubo uma ngizama ukuvula ifayili nge-poedit kunginikeza iphutha bese kuthi konakele.
Ungabamba ifayili loqobo le-n.po kusuka ku- http://sourceforge.net/p/bluefish/code/HEAD/tree/trunk/bluefish/po/en.po?format=raw
1) Landa en.po kusuka kuluhlaza okwesibhakabhaka
2) kopisha en.po to eo.po ukuyihumushela ku-Esperanto
3) Vula i-o.po nge-helptranslator
4) Njengoba sekuvele kunemisho embalwa ehunyushwe ekuqaleni, maka ibhokisi [x] Susa imisho ebihunyushiwe
5) Okuqukethwe ebhodini lokunameka ukukopishele kufayela elisha le-ingles.txt
6) Humusha idokhumenti nge-Google Translate kusuka esiNgisini kuye e-Esperanto.
7) Khetha konke ukuhumusha (inkinobho yegundane kwesokudla bese ukhetha konke) bese ukunamathisela ku-Helptranslator
8) Kuphelile? Cha, manje vala i-helptranslator bese uvula ifayela le-eo.po kusuka ku-poedit: error.
Kulungile, ngizobona okwenzekayo. Uma kuyimbungulu, ngizozama ukuyilungisa.
Ngilulungisile uhlelo, futhi ngenguqulo entsha engu-0.0.8, ayisanikezi iphutha lapho ulihlela nge-poedit.
Ungayilanda kubhulogi yami:
Sawubona, unayo inguqulo yamawindi ??? Ngiyabonga kakhulu kusengaphambili